Kismaayo News » Been abuurad lagu sameeyey Xildhibaan Shuuriye
Been abuurad lagu sameeyey Xildhibaan Shuuriye
Kn: Iyada oo xildhibaanada kazoo jeeda gobolada Jubbooyinka ay yihiin kuwa tiro ahaan yar, tayadooduna badantahay xag aqoon, waayo-aragnimo, karti iyo in ay yihiin kuwa si dhab ah u matala dadkooda ayaa waxaa soo baxaya dad isu taagay in ay bah dilaan, oo ay been ka sheegaan xildhibaanada.
Xildhibaanada lagu been abuurtey waxaa ka mid ah Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo dad been hawaasyo ah ay suuqa u galiyeen in uu kaliya ku fooganyahay arrimaha Jubbada Hoose, islamarkaasina uu hilmaamay qeybihii kale ee deegaanka, iyo beelaha Absame.
Balse xogo ay heshey shabakada KismaayoNews ayaa illo wareedyo kala duwan waxa ay noo xaqiijiyeen in taasi badalkeedu uu xildhibaanka ka hadlo, kana shaqeeyo danaha gobolka Bakool oo ay deegaano badan ku leeyihiin beesha Absame iyo Guud ahaan Jubbooyinka.
Xildhibaanka waxaa kale oo ay shabakadu ogaatay in uu sameeyey arrimo badan oo siyaasi ah, taas oo ay ka midtahay in shacabka Soomaaliyeed loo tusin in beesha Absame kaligeed in ay wax gaar ah dooneyso, waxaan kaloon ogaanay in siyaasigu in uu hawlo badan ka qabtay magaalada Xamar.
Waxa kale oo uu xildhibaanka si weyn u aaminsanyahay dastuurka dalka u yaala iyo waxa uu ka qabo maamul goboleedyada, isagoo rumeysan in dadka deegaanadda Jubbooyinka ay aayahooda ka tashadaan.
Xildhibaanka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey dalka Kenya, isagoo la kulmey dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada, noqdeyna xildhibaankii ugu horeeyey ee sidaasi yeela, taasina ay ka turjumeyso in wararka laga faafiyey aysan lahayn sal iyo raad.
Sidaasi darteed waxaa haboon in shacabka aysan ku marin habaabin wararka noocaasi oo kale ah, lagana dhursugo waxqabadka xildhibaanada oo 4 bilood oo kaliya xilka haya.
Dhanka kale xildhibaanka ayaa wada qorshayaal uu xafiis oga furanayo goboladda Jubbooyinka si xafiiskaasi uu u noqdo mid isku xira xafiiskiisa Xamar iyo dadka gobolka, si dhibaatada ay qabaan dadkiisa uu had iyo jeer baarlamaanka u dhex geeyo.
Guntii iyo gabogabadii dad kala duwan oo ka tirsan bulshada Jubbooyinka, gaar ahaan dhalinyarada, haweenka iyo odayaasha oo la kulmey mas’uulkani ayaa noo sheegey in eedeymaha loo jeediyey Xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye ay yihiin kuwa la doonayo in lagu soo cimri gaabiyo mustaqbalkiisa siyaasadeed ee soo ifaya maadaamaa uu yahay siyaasi da’yar, firfircoon, saaxadda siyaasaddana dardar kusoo galay, waxa ay sheegeen in uusan nin ay ka suuroowdo in uu kala sooco gobolada iyo dadka.